U-Andrei Malakhov ushiya i-First Channel ... noma akahambanga
Lokhu ekuseni ku-Inthanethi kwakukhona izindaba ezingalindelekile ukuthi u-Andrei Malakhov ushiya isiteshi se-One. Izindaba zazibonakala zingenangqondo ukuthi akuwona wonke umuntu okholelwa kulo. Manje uhlelo lomethuli we-TV Let Let It lihlala linye yezinga eliphezulu kakhulu esikhaleni seRussia, futhi uMalakhov ngokwakhe ubhekene nesiteshi se-Channel One. Ngempela, uma usufike ezindaweni eziphakeme kangaka, ungamane uhambise emncintiswaneni?
Uphi u-Andrei Malakhov ozophuma esiteshini sokuqala? Umthombo ubika ukuthi umholi oneminyaka engu-45 ubudala wakhelelwa isiteshi se-Rossiya 1 TV ye-VGTRK inkampani.
Osebenza nabo baphakamise ukuphawula kuka-Andrei Malakhov kusuka ku-Channel One
Ulwazi olwenziwe kumaphephandaba namuhla aluqinisekisiwe ngokusemthethweni noma ngobuholi beziteshi ezikhulunywe ngazo, noma yi-host host ye-TV noma abameleli bayo. Kodwa phakathi kozakwethu, imibono yahlukaniswa. Ongaziwa ngaphakathi ku-First Channel utshele abezindaba ukuthi u-Andrei Malakhov ubelokhu ephikisana nomkhiqizi omusha uNataliya Nikonova izinyanga ezimbalwa. Ngokomthombo, lona wesifazane ukhuthaza uDmitry Shepelev ngenhloso entsha "Eqinisweni."
Omunye umthombo uchaza ukuhamba kukaMalakhov ngokuthi ubuholi beSiteshi One kumuntu kaConstantin Ernst awuvumeli umethuli ukuba akhiqize ngokuzimela izinhlelo zakhe siqu.
Yebo, abanye osebenza nabo base-Andrei Malakhov bayaqiniseka ukuthi indaba ngokuhamba kwakhe ku-First Channel akuyona into engaphezu kuka-PR. Futhi umthombo usolwa ukuthi amahemuhemu anjalo avela kuMalakhov ngokwakhe, manje usechitha iholidi lakhe eYurophu.
Ngesikhathi esifanayo, ababhalisile be-Instagram Andrei Malakhov bayaqiniseka ukuthi umphathi we-TV wenze isinqumo esifanele sokushiya isiteshi:
alex_sinit Ngendlela, ngezwa ukuthi de de Malakhov uzoshiya Okokuqala. Uma kunjalo, ngilungele ukuhalalisela u-Andryushka. Andrei, thola isiteshi se-TV esihle ngaphandle kwe-chernukha.
fedirina87 Awuzange usize wonke umuntu !!! Kodwa maduzane kwakungeke kwenzeke ukubukela uhlelo! Lokhu kwesabisa okungapheli ngesimo se-Shurygin, i-Dzhugurda ne-Panin, ngithemba, kuzophela. Ngaphandle kwakho uhlelo ngeke luphile.
Ngendlela, izindaba zokuqala ukuthi u-Andrei Malakhov ushiya iSiteshi Sokuqala futhi ushiya "Uhlelo Lwase-Let It Be" lwabikwa kubafundi bethu ngesayithi lethu. Lokho cishe inyanga edlule. Kodwa-ke, isizathu sokuhamba kuka-Andrei Malakhov kwaba ... kwezombusazwe. Siphawula ku-Zen le ndaba 👍 futhi sihlale siqaphela zonke izinkathazo nezisulu zokuhweba ibhizinisi.
UJamala washintsha isithombe sakhe ngaphambi kwe-Eurovision-2017, isithombe
UVictoria Bonya ubeke amahemuhemu mayelana nokuhlukaniswa nomyeni wakhe, isithombe
U-Natalia Podolskaya uphangiwe "kwi-Wave entsha"
Indodana kaHabensky izoya esikoleni eSpain
Indaba yokukhulelwa kwendodakazi ka-Alexander Malinin yayiyihlaya
UJulia Baranovskaya ulungele ukwamukela umyeni wangaphambili wesilisa
Utamatisi oqoshiwe ngenyama nokugcoba okumnandi
Indlela yokuxhumana nomuntu othulile?
Izicupho Zezemfundo: Izindlela Ezinhlanu Ezivinjelwe
Ubumnandi bumnandi wonke umndeni
U-Alena Vodonaeva "waqothula" ukhonkolo ngenxa yesikhumba esincane, isithombe
Umhlahlandlela Osheshayo Wokulala Ngomlomo
Imuphi umbhangqwana onqoba ukugcina kwe-"Ice Age 2016" ku-First Channel - imibono yabachwepheshe nabalandeli
Indlu itshalwe i-alocasia
I-TOP-5 izinwele zezinwele ezishintshayo zasebusika 2016-2017
Amafutha abalulekile kanye nezakhiwo zabo zokwelapha
Isinkwa sase-Adzimka (Adzimka)
"I-Barefoot" ehlobo ngezimbadada ezimfashini zonyaka ka-2014
Ilanga eliningi: iqoqo le-makeup Chanel Dans La Lumiere de L'Ete